Karman व्हीलचेयर पसल सबैभन्दा ठूलो म्यानुअल व्हीलचेयर ब्रान्ड
सर्वश्रेष्ठ व्हीलचेयर ब्रान्ड र हेल्थकेयर च्वाइस सन १। ४
निर्माण र चिकित्सा आपूर्ति अनलाइन स्टोर: व्हीलचेयर, हल्का, अल्ट्रा हल्का, स्थायी शक्ति, म्यानुअल व्हीलचेयर, यातायात व्हीलचेयर, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, रोलेटर, वाटरहरू र सक्रिय व्हीलचेयर सिधै तपाईलाई पठाइयो। साथै, राम्रो व्हील चेयर बनाउनु पर्छ तिम्रो जीवन सजिलो। तेसैले, हामी ergonomics र हल्का मा विशेषज्ञता। उत्कृष्टता को माध्यम बाट गतिशीलता तपाईंप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता हो! अहिले किनमेल गर्नुहोस् र बचत गर्नुहोस्!
KN-TV10A - 14.9 LBS यात्रा व्हीलचेयर
किनमेल हाम्रो व्हीलचेयर स्टोर - हल्का व्हीलचेयर
Karman मा, हामी म्यानुअल को लागी १०० भन्दा बढी मोडेलहरु छन् व्हीलचेयर बाट छनौट गर्न। सामान्य मा, यदि तपाइँ आफैंलाई एक पा wheel्ग्रा कुर्सी मा प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ उपलब्ध सबैभन्दा हल्का सबैभन्दा आरामदायक व्हील-कुर्सी चाहानुहुन्छ। उपलब्ध सबै कोटिहरु को बारे मा अधिक जान्नुहोस् र त्यसपछि उत्पादन वजन र बजेट द्वारा छनौट गर्नुहोस्। सबै कुर्सीहरु फरक फरक गरीएको छ। तेसैले, उनीहरु सबै आफ्नै तरीका बाट अद्वितीय छन्। एक Karman कुर्सी किन्नु साँच्चै एक किन्नु जस्तै हो अनुकूलन कुर्सी। हामी कुनै पनी पसल बाट widdest चयन छ। एक सिंहावलोकन मा शुरू गरौं। यहाँ केहि श्रेणीहरु र तपाइँको समीक्षा को लागी जानकारी छन्:
यातायात व्हील-कुर्सीहरु को लागी र स्थानहरु बाट तपाइँ संग यात्रा गर्न मनपर्छ बाट ढुवानी को लागी एक सही विकल्प हो। यो सरल छ। तसर्थ, tt lighwight र भण्डारण गर्न सजिलो छ। A ढुवानी कुर्सी ढुवानी सामान्यतया संकुचित र एक भन्दा हल्का छ मानक व्हील चेयर, यो तंग बाधाहरु र संकीर्ण entryways को लागी एक राम्रो विकल्प बनाउन। यो "फुलर" आकार को तुलना मा कुर्सी को प्रवेश स्तर मा विचार गरिनेछ। हाम्रो उच्च अन्त बीच मतभेद छन् दुर्घटना S-ERGO परीक्षण श्रृंखला यातायात व्हील-कुर्सियों र पनि अर्थव्यवस्था ग्रेड उत्पादनहरु। केहि महान छनौटहरु हाम्रो सामेल छन् ईर्गो लाइट र S-115TP। हामी पनि यात्रा को लागी बनेको एक व्हील कुर्सी छ, टिभी -10 B.
मानक वजन पाel्ग्रा कुर्सी
धेरै मानक वजन पा wheel्ग्रा कुर्सीहरु 34 पाउन्ड मा शुरू हुन्छ। यो एक हुनेछ मानक weght व्हील चेयर। यो एक महान विकल्प हो जब तपाइँ एक व्हील-कुर्सी को जरूरत छ कि बारम्बार प्रयोग गरिने छैन। सामान्यतया,3घण्टा वा कम प्रति दिन र कम स्थानान्तरण संग। यो प्रकार हो कि तपाइँ एयरपोर्ट वा अस्पतालहरुमा देख्नुहुन्छ। अन्तमा, कुनै frills र केहि आधारभूत। डाक्टरको आदेश अनुसार मात्र। हाम्रो पूर्ण चयन निश्चित legrests र armrests संग सबैभन्दा आधारभूत मोडेल बाट उपलब्ध छ व्हीलचेयर कि वैकल्पिक उन्नत legrests र हटाउन सकिने armrests छ। हामी वास्तव मा अस्पतालहरु र एयरपोर्टहरु आपूर्ति गर्छौं त्यसैले यदि तपाइँ त्यहाँ एक देख्नुहुन्छ भने आश्चर्यचकित नहुनुहोस्। कहिलेकाहीँ एक आधारभूत कुर्सी सबै तपाइँलाई चाहिन्छ। विशेष गरी यदि यो एक अस्थायी आवश्यकता हो। त्यहाँ संग मोडेलहरु पनि छन् वैकल्पिक सामान आफ्नो व्हील-कुर्सी बृद्धि गर्न. फोम कुशन र/वा जेल कुशन अतिरिक्त आराम को लागी प्रदान गर्नुहोस्।
हल्का पा Whe्ग्रा कुर्सी
यसबाहेक, 25-34 पाउन्ड बाट वजन संग, हाम्रो हल्का ह्वील चेयर एक महान छनौट हो जब तपाइँ एक व्हील-कुर्सी को जरूरत छ कि अधिक बारम्बार प्रयोग गरीन्छ, जब तपाइँ विशेष विकल्पहरु को जरूरत छ, वा जब तपाइँ तपाइँको मुटु एक विशिष्ट फ्रेम र/वा असबाब रंग संयोजन मा सेट छ। यस श्रेणी मा यो सबै कभर छ, प्रतिस्पर्धी मूल्यहरु मा हल्का पहिया कुर्सियों संग। यस को कारण, यी व्हील-कुर्सीहरु अधिक विकल्पहरु लाई प्रदान गर्दछ र हामी सामान्यतया सिफारिश गर्दछौं कि एक तुलना अर्को चरण को श्रेणी संग गरिनेछ जुन हाम्रो छ अल्ट्रालाइट तौल व्हील-कुर्सियों जहाँ अन्तिम गतिशीलता उपकरण र सुविधाहरु यसको धेरै राम्रो मा छन्।
यसको अतिरिक्त, यो व्हील-चेयर को श्रेणी हो जहाँ सबै भन्दा राम्रो को सर्वश्रेष्ठ बस्छ। व्हील-चेयर 14.5 पाउन्ड को रूप मा कम वजन र दुबै मा उपलब्ध संग S-ERGO र बस सुपर हल्का मोडेलहरु। तेसैले, एक अल्ट्रालाइट तौल व्हील-चेयर प्रदर्शन को मांग गर्नेहरु को लागी र जो स्वयं हलचल र यातायात को सजीलो को लागी सबै भन्दा हल्का पा wheel्ग्रा कुर्सी चाहने को लागी पूर्ण समय प्रयोगकर्ता को लागी हो। यस कोटी मा, तपाइँ सुविधाहरु को एक संख्या मा मानकीकृत क्र्यास परीक्षण जस्तै कुनै पनि प्रतियोगिहरु मा कहिल्यै पाउनुहुनेछ S-ERGO मोडेल र टन विकल्प र सामान व्हील-कुर्सी विकल्पहरुमा अन्य आधार कोटिहरु मा प्रस्ताव गरीएको छैन।
सक्रिय पाel्ग्रा कुर्सी
एस-एर्गो ATX व्हील चेयर विनिर्माण विषयहरु को एक संयोजन मा उत्कृष्ट प्रदान गर्दछ। जे होस्, यी मापदण्डहरु मा शामिल छ तर अधिकतम समायोज्यता, कठोरता, अल्ट्रा हल्का, आराम, foldability, शैली र उत्कृष्ट प्रदर्शन सम्म सीमित छैन। हाम्रो अल्ट्रा हल्का व्हील चेयर श्रेणी हाम्रो आर एण्ड डी विभाग नवीनतम निर्माण प्रविधिहरु र क्षमताहरु लाई धकेल्दै र उनीहरुलाई सडकमा तपाइँलाई हस्तान्तरण संग शून्य सम्झौता लिन्छ। सारांश मा, लाइन विकल्प को एक शीर्ष को रूप मा, यहाँ शुरू गर्नुहोस्। यदि तपाइँ सबै भन्दा राम्रो को लागी खोज्दै हुनुहुन्छ, यो वास्तव मा शुरू गर्न को लागी एक महान ठाउँ हो।
झुकाव / झुकाव पाel्ग्रा कुर्सी
एक reclining फिर्ता वा अन्यथा एक "उच्च फिर्ता" को रूप मा जानिन्छ व्हीलचेयर यो एक ठूलो विकल्प हो जो एक व्हील-कुर्सी मा आफ्नो समय को बहुमत खर्च को रूप मा यो झुकाव को लागी अधिक स्थिति प्रदान गर्दछ। र क झुकाव व्हील चेयर वैकल्पिक स्थिति र दबाव को राहत प्रदान गर्दछ जो एक को लामो उपयोग को लागी थप दबाव राहत को आवश्यकता छ व्हीलचेयर। वास्तव मा, हाम्रो दुबै कोटिहरु लाई प्रभावी ढंग बाट परम्परागत प्रतियोगीहरु को वजन कम गरीएको छ। Therefoer, यो ध्यान मा राख्न को लागी जब मूल्य मा किनमेल गर्न निश्चित हुनुहोस्। विमान ग्रेड एल्युमिनियम जस्तै प्रकाश सामग्री हामी के प्रयोग गर्छौं।
भारी शुल्क पाel्ग्रा कुर्सी
बेरिएट्रिक व्हील-कुर्सियों को अधिकतम weight०० पाउण्ड को वजन टोपी छ, यी भारी शुल्क पा wheel्ग्रा कुर्सीहरु एक अधिकतम संग लगभग कुनै पनि प्रयोगकर्ता समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ सीट चौडाई चौडाई मा 30 को। Karman को एक पूरा दायरा बोक्छ भारी शुल्क व्हीलचेयर, किफायती बाट बेरिएट्रिक ढुवानी कुर्सीहरु, गर्न जटिल अत्यधिक विन्यास / कस्टम मोडेल. हामी पनि आफ्नो सीट चौडाई र वजन टोपी को लागी उद्योग मा हल्का तौल बेरिएट्रिक व्हील-चेयर छ।
एक पा wheel्ग्रा कुर्सी मा खडा सबैभन्दा प्रभावशाली उत्पादनहरु को डिजाइन गरीएको छ र हाम्रो अनुमति को लागी हाम्रो प्रयास मा निर्मित छ गतिशीलता आफ्नो जीवन फिर्ता हात मा लिन को लागी अशक्त। जे होस्, हामी मात्र मानिसहरुलाई एक पा wheel्ग्रा कुर्सी मा उभिन अनुमति दिएर रोकेनौं; हामीले यसलाई रोजगारीको घर होल्डिंग मा यसको श्रेणी ड्राइभि economy अर्थव्यवस्था मा सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी मूल्य उत्पादन बनायो। जे होस्, सबै मा अधिक पढ्नुहोस् लाभ, कोष स्रोतहरु, र वित्त विकल्प यदि तपाइँ तपाइँको पा wheel्ग्रा कुर्सी मा तपाइँलाई खडा गर्न मा रुचि राख्नुहुन्छ। तपाइँ खुशी हुनुभयो कि तपाइँ गर्नुभयो। वा हाम्रो यूट्यूब भिडियो हेर्नुहोस्। हामी गहन उत्पादन समीक्षा छ। हामीसँग उनीहरुको सरल समीक्षा पनि छ।
Karman बाट एक व्हील चेयर किन्न को लागी प्रक्रिया के हो?
तपाइँ हामी बाट एक व्हील चेयर किन्न को लागी धेरै तरिकाहरु छन्। उत्पादन मा निर्भर गर्दछ, तपाइँ या त एक बाट किन्न सक्नुहुन्छ अधिकृत ईंट र मोर्टार व्यापारी, वा अनलाइन। यो तिमीमा भर पर्छ। यसलाई सरल राख्नुहोस्। तपाइँ हाम्रो अमेजन वा Walgreens को रूप मा हाम्रो वेबसाइट पुनर्विक्रेताहरु को कुनै पनि बाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाइँ यो वेबसाइट बाट सीधा किन्न सक्नुहुन्छ। एक डीलर बाट सबै किने पछि मात्र एक अनलाइन भन्दा राम्रो अनुभव हुन सक्छ। वा उल्टो।
Karman को राष्ट्र को अग्रणी निर्माता हो व्हीलचेयर
Karman हेल्थकेयर विनिर्माण र घर चिकित्सा उत्पादनहरु को वितरण मा एक अग्रणी आविष्कारक भएको छ 1994 पछि। हामी सबै भन्दा राम्रो कुर्सीहरु को केहि छ। नतिजाको रूपमा, Karman शक्ति र म्यानुअल को एक पूर्ण लाइन प्रदान गर्दछ व्हीलचेयर, वाटरहरू, rollators, र स्कूटर, अक्सिजन नियामक, बाथरूम सुरक्षा र अन्य घर हेरचाह उत्पादनहरु। तेसैले, अब पसल र बचत गर्नुहोस्! हामी सबै प्रकार को मा विशेषज्ञता गतिशीलता उत्पादनहरु। हाम्रो व्हीलचेयर तपाइँ प्रतिस्पर्धा द्वारा बेजोड अनुभव संग प्रदान गर्दछ। हाम्रो जानकार स्टाफ संग आज बोल्नुहोस् तपाइँ कुनै प्रश्न वा चिन्ता छ। पत्ता लगाउनुहोस् किन हाम्रो पेटेंट ergonomic सीटहरु आराम को लागी अग्रणी नवाचार उद्योगहरु हुन्!
म्यानुअल र पावर स्थायी व्हीलचेयर
कर्मा® को एक सय भन्दा फरक मोडेलहरु प्रदान गर्दछ व्हीलचेयर कि तपाइँ बाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। उद्योग मा एक नेता को रूप मा, हामी एक विविधता प्रदान गर्दछ मैन्युअल व्हीलचेयरsसहित यातायात व्हीलचेयरs, मानक व्हीलचेयरs, हल्का व्हीलचेयरs, अल्ट्रा लाइटवेट व्हीलचेयरs, एर्गोनोमिक व्हीलचेयर र अधिक। तेसैले, हामी यहाँ तपाइँको सबै को लागी छौं गतिशीलता आवश्यकताहरु। एक श्रेणी, मोडेल, रंग वा यहाँ सम्म कि मूल्य बिन्दु को छनौट अन्तिम प्रयोगकर्ता को लागी हाम्रो "कला को राज्य" लाई पूर्ण रूपमा सराहना गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ। गतिशीलता उत्पादनहरु। हाम्रो पेटेंट जाँच गर्न नबिर्सनुहोस् एस ERGO एस आकार आसन प्रणाली। हामी एक आदर्श कुर्सी खोज्न प्रतिबद्ध छौं। नतिजाको रूपमा, हामी तपाइँको लागी समर्पित छौं गतिशीलता आवश्यकताहरु। हाम्रो जाँच गर्नुहोस् स्थायी व्हीलचेयर र नवीनतम प्रविधि. तपाइँको विशिष्ट आवश्यकताहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो कुर्सी खोज्नुहोस्।
व्हीलचेयर प्रतिस्थापन भागहरु